Shiinaha Alwaax aan Nadiif lahayn Alwaaxda Qoryaha Soo-Saaraha iyo Alaab-qeybiye | Dabka Dahabka
Cabir: 48.2x25x35.5 cm (bilaa tuubooyin)
Miisaanka: 3.5 kg
Nooca Shidaalka: Qoryo
Shaxanka Qoryaha Nadiifka ah ee Birta ah
Ma dooneysaa dab damis laakiin waxay leeyihiin deris kuu dhow oo ka caban doona qiiqa? Imaatinka Cusub ee Foornooyinka Alwaaxda la qaadan Karo ee Cunto Kariska ma noqon karo mid adiga kaafiican. Mashiinka wax lagu karsado ee kaamamka ah waxaa loogu talagalay inuu ku siiyo dab ololaya oo aan qiiq lahayn si uu u dhibaateeyo dadka deriska ah. Marka waad macsalaameyn kartaa dhibaatooyinka iyo halista qaadista propane. Weelkan wax lagu karsado ee alwaaxa banaanka ah waa ka fududahay in la xakameeyo oo ka badbaado dabka dhaqameed, iyo godadka dabka ee banaanka waa kuwo fudud oo aad si fudud ugu qaadi karto.
Faahfaahinta Foornooyinka Qoryaha Birta ah
Kala Bixinta: 50x55.1x45.7cm
Cabbirka Laabidda: 48.2x25x35.5cm
Talooyin ku Saabsan Qalabka: Ku darida korantada wax lagu karsado, waxaan kugula talineynaa derin dabka kahortaga. Waxay kaa caawineysaa inaad ka hortagto marsada inay daadato, taasoo keeneysa qatar nabadgelyo.
makiinada wax lagu kariyo ee wax lagu kariyo ee harsan oo ah cabir wax ku ool ah oo loogu talagalay karinta cuntada buuxda iyo bixinta diiran habeenada qabow
Cimilo adkaysi u leh, culeys xamuul oo waaweyn, cimri dherer, iyo astaamaha miridhku. Laakiin waxaad u baahan tahay ogeysiis, sababtoo ah kuleylka aadka u sarreeya, birta birta ah ee birta ah ayaa aakhirka midabkeedu xumaanayaa. Soo-gaadhista muddada dheer ee cimilada ayaa kordhin doonta miridhka iyo midab-beddelka laakiin ma saamayn doonto isticmaalka caadiga ah.
Miisaankeedu waa 6 kg, xajmiga iibinta kariyaha qoryaha cabbirkiisa wuxuu fududeynayaa in la raaco xitaa qaybaha ugu yar. Waxay ku habboon tahay waxqabad kasta oo bannaanka ka socda laga bilaabo kayaking ilaa boorsada dhabarka ama xitaa dhabarka dambe.
Maxaa yeelay shooladaha alwaaxda ee wax lagu karsado waxay ka baxaan dab aan raad lahayn, markaa waad u qaadan kartaa kaamam dhib la'aan. Istaagtu waxay sare u qaadeysaa godka dabka si hawadu u sii socoto hoostiisa, markaa waxaad ugu adeegsan kartaa sagxad alwaax ah ama doog. Qalabka dibedda ugu fiican ayaa gubta qoryaha ama qoryaha yaryar.
Ahama Sawirada Alwaaxda Birta ah
Hore: Ahama steel solay for Cooking
Xiga: Wall teendhada Mini Wood Stove Iyadoo Lugaha laabanto
Foornada Cuntada lagu karsado
Ahama BBQ ahama
shooladda birta ah ee birta ah
Godka Dabka ee Gubanaya
Teendhada Teendhada Birta ah ee 304 ahama
Foornada Nadiifka ah ee Kaamamka Nadiifka ah ee Lagu Qaadan Karo Oo leh Muraayad
Foornada adag ee shidaalka lagu gubo ee foornada leh
Isku laaban foornada teendhada kulul ee loogu talagalay Kaamamka
Kaambada Fudud ee Dhirta Xajmiga ah ee Taambuugga
Wall teendhada Mini Wood Stove Iyadoo Lugaha laabanto
Kaamamka Biyaha Lagu kariyo ee Kaamamka ah, shooladda birta ah ee birta ah, Bannaanka Alwaaxda Gubashada, Kaam Dabka Gubay, Teendhada Qoryaha Teendhada, Foornada Cuntada lagu karsado,